Kim Kardashian dia naneso ny mpitsikera taorian'ny fihanaky ny zava-kanton'ny zanakavavin'i North West - Pop-Kolontsaina
Kim Kardashian dia naneso ireo mpitsikera taorian'ny fihanaky ny zava-kanton'ny zanakavavin'i North West
Kim Kardashian, reny manan-janaka efatra, dia nitehaka tampoka tamin'ireo troll izay nanontany tena ny maha-ara-dalàna ny sanganasan'ny zanany vavy.
Fotoana fohy taorian'ny nandefasany tantara Instagram momba ny sary hosodoko Avaratra Andrefana, niditra an-tsehatra ny mpiserasera, niantso ny sary ho mariky ny 'Bob Ross' manaraka ary nilaza fa tsy misy fomba fanaovan'ny zaza iray fito taona izany.
Tsy misy na iza na iza mamela ireo troll hanafika ny asan'ny zanany vavy, Kim Kardashian dia nametraka ireo mpankahala tamin'ny toerany tamin'ny andian-tantara.
ny fomba fitakiana fanajana amin'ny lehilahy
Vakio ihany koa: Ny teoria tsikombakomba farany nataon'ny fiarahamonina TikTok dia nilaza fa Addison Rae dia ao anatin'ny The Illuminati
Kim Kardashian miaro ny asan'ny zanakavavin'i North West
Androany any amin'ny DRAGGED: notaritaritin'ny Twitter i Kim Kardashian taorian'ny nandefasana sary hosodoko nataon'i North West. Betsaka no tsy afaka mino fa tena afaka mandoko zavatra amin'ny antsipiriany tokoa ny Avaratra. Ny zanakavavin'ny mpampianatra zavakanto Avaratra dia nanamafy fa ny Avaratra no nandoko azy. pic.twitter.com/na6FzmR4LM
- Def Noodles (@defnoodles) 9 Febroary 2021
Niteraka ny fifanoherana rehefa nandefa ny sarin'ny sanganasan'ny zanany vavy i Kim Kardashian. Betsaka avy eo no nanesoeso azy ireo ary nilaza fa tsy misy fomba zaza nanao an'izany.
Troll nanomboka nandefa zava-kanto kilasika, nilaza fa nanao izany ny zanak'izy ireo, ary nanomboka nanamarika ny sosialista amerikana tao amin'ny Twitter.
Mpampiasa Twitter maro no mitantara ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fandefasana sary hosodoko mahazatra ary nilaza fa ny zanany kely na ny biby fiompy no nahatonga izany. pic.twitter.com/z0sHhGxJ0a
Nandeha lavitra ny fankahalana ka nisy olona niditra an-tsehatra nanitsy ny firaketana. Zanakavavin'ny mpampianatra zavakanto Avaratra Andrefana ny olona iray, izay nandefa porofo tao amin'ny TikTok fa ny mpianatra tsirairay avy aminy dia tsy maintsy manao sary mitovy.
Ity TikToker ity dia nilaza fa zanakavavin'ny mpampianatra zavakanto any North West. Nilaza ny TikToker fa ny Avaratra no nandoko ny hosodoko. pic.twitter.com/RZ4ZUPzzqO
alice amin'ny teny miafina Wonderland efa lasa adala aho
Tsy vonona ny handefitra amin'ny fanendrikendrehana ny zanany vavy i Kim Kardashian ka nanaparitaka ny fahanginany tamin'ity olana ity ary nandefa andiana tantara tao amin'ny mombamomba azy Instagram:
'AZA milalao amiko rehefa tonga any amin'ny zanako !!! Ny zanako vavy sy ny sakaizany akaiky indrindra dia nandia kilasy fandokoana menaka matotra izay mamporisika sy kolokoloina ny talentany sy ny fahaizany mamorona. Niasa mafy tokoa i North tamin'ny sary hosodoko, izay naharitra herinandro maromaro vao vita. Amin'ny maha-reny miavonavona ahy dia te hizara ny asany amin'ny rehetra aho. Mahita sombin-javatra op-ed amin'ny haino aman-jery sy haino aman-jery sosialy avy amin'ny olon-dehibe efa lehibe manaparitaka na nandoko an'io na tsia ny zanako! Ahoana no ahasahianao mahita ny ankizy manao zavatra mahatalanjona ary avy eo manandrana miampanga azy ireo fa TSY mahatahotra!?!?! Azafady mba atsaharo ny fahafaham-baraka ny tenanareo amin'ny maha-ratsy azy ary avelao ny ZANAKA ho lehibe !!! NY NORTH WEST dia nanoratra izany fotoana izany! '
Raha nijanona ny dinika dia namoaka ny sary hosodoko nataon'i Kanye West izay nataony tamin'ny fahazazany ihany ilay kintana fahitalavitra.
Ny hafatr'i Kim Kardashian ho an'ireo troll (Sary avy amin'i Kim Kardashian, Instagram)
Kim Kardashian nizara sioka bebe kokoa. Nizara sary namboarin'i Kanye West ihany koa izy ary nilaza fa Throwback tamin'ny asan'ny zavakanto dadany izay nataony fony izy mbola kely. pic.twitter.com/JWgNJQCT4M
Vakio ihany koa: David Dobrik dia mampiseho ny tranony vaovao amin'ny fiverenan'ny YouTube
ahoana no ahafantaranao raha ao aminao izy
ny fomba tsy ho mahery setra amin'ny fifandraisana
aiza no hanombohana fiainana vaovao
dragona super goku maty maty
mr. harato net mahafinaritra
Undertaker vs shawn michaels helo ao anaty sela iray